‘नेतृत्वबाट शहीद परिवारलाई धोका भयो’ « Drishti News – Nepalese News Portal
७ आश्विन २०७८, बिहिबार
‘नेतृत्वबाट शहीद परिवारलाई धोका भयो’
विश्वेश्वरा दाहाल, (सुखानीका शहीद रामनाथ दाहालका श्रीमती तथा पूर्व सांसद)
२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार 9:43 am
चन्द्रगढी जेलमा हुँदा रामनाथ जीलाई अन्तिम पटक भेटेको थिएँ । त्यो भेटमा उहाँले भन्नु भएको थियो– ‘हाम्रो पार्टी बच्यो भने, वर्गीय लडाइँको क्रममा कम्युनिष्ट सत्ता आयो भने, कम्युनिष्टहरूको सरकार बन्यो भने दुईवटा कुरा हुन्छन्, नेताहरु प्रलोभनमा फसे राष्ट्र र जनताले ठूलो दुःख पाउँछन् । प्रलोभनमा फसेनन् भने सबै जनता खुसी हुन्छन् । जनताको अनुहारको खुसी आउने छ । होइन भने देश र जनताले दुःख पाउनेछन् । हाम्रो रगतको मूल्य पनि खेर जानेछ ।’
आज म त्यही पल स्मरण गर्दैछु । देश संकटमा छ । रामनाथजीले भन्नु भए जस्तै कम्युनिष्टको नेतृत्वमा धेरै पटक सरकार त बन्यो तर जनताको मुखारमा खुसी छाउन सकेको छैन । शहीदको बलिदानकै अपमान भएको छ ।
झापा विद्रोहले जुन उद्देश्य लिएको थियो, त्यो उद्देश्य अनुसार नेतृत्वले भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । वर्गीय आन्दोलनबाट सत्तामा पुगेपछि नेतृत्व विचलित भए । देश र जनताको हितमा काम गरोस् भन्ने हो । तर गर्न सकेनन् । यो झापा आन्दोलन मात्र होइन, देशमा भएका सबै राजनीतिक आन्दोलनको उद्देश्य विपरित छ । यो देशको लागि ठूलो दूर्भाग्य हो ।
शहीदले धन सम्पत्ति भनेनन्, परिवार भनेनन् तर आज शहीदको अबमूल्यन भएको छ । पार्टीका नेतृत्वले हिजो ‘शहीद परिवारको जिम्मा लिन्छौं, पार्टीले जिम्मा लिन्छ’ भनेका थिए नेताले शहीद परिवार भूले, आन्दोलनमा सहभागी सबै भूले । आज, परिवावाद हावी भएको छ । अहिले त श्रीमान–श्रीमती, सासु–ससुरा, छोरा–छोरी, बुहारीको राम राज्य छ ।
कम्तिमा पनि हिजो राजनीति गर्ने क्रममा दुःख पाएका मान्छे कुन अवस्थामा बसेका छन् भन्ने नेतृत्वले खोज्नु पर्ने हो, तर वास्तै गर्दैनन् । के गरिरहेका छने, अवस्था कस्तो छ ? भनेर एउटा कमिटी बनाए बुझ्ने, उनीहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्ने, उनीहरूका समस्याहरू समाधान गर्नेतर्फ कोही लागेनन् । कुर्सीका लागि मात्रै लडाईँ भयो, हुँदैछ ।
पार्टीका नेतृत्वले हिजो ‘शहीद परिवारको जिम्मा लिन्छौं, पार्टीले जिम्मा लिन्छ’ भनेका थिए नेताले शहीद परिवार भूले, आन्दोलनमा सहभागी सबै भूले । आज, परिवावाद हावी भएको छ ।
आज कुनै एक नेतृत्व मात्र कम्युनिष्ट आर्दशबाट विचलित भए भन्ने अवस्था छैन । झापा विद्रोहबाट आएकादेखि जनयुद्धबाट आएका सबै नेतृत्वमा विचलन आएको छ । हिजो जनताको वरिपरि बसेर हाम्रा सुरक्षा गर्ने जनता छन् भनेर हिँडेका नेता आज उनै जनतालाई विश्वास गर्न नसक्ने भएका छन् ।
नेता वारिपरी ४०/५० जना सुरक्षाकर्मी लिएर जनतासामु पुग्ने भएका छन् । राजामहराजाले पनि यति धेरै गरेका थिएनन् । सत्तामा पुगेपछि कम्युनिष्ट नेतृत्व राजामहाराजा भन्दा पनि खत्तम भए ।
आधारभूत वर्गसँग कम्युनिष्ट पार्टीको सम्बन्ध टुट्दै गएको छ । नेतृत्व श्रमजीवि वर्गलाई हेला गरेर दलाल पूँजीपतिलाई माया गर्ने भएका छन् । बारम्बार कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर, नेतृत्वले आफ्नो विगत विर्सेका कारण आफ्नो वर्गको पक्षमा काम गर्न आवश्यक ठानेनन् । देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्ने काम भएको छ ।
जनताको पक्षमा काम गर्ने लक्ष्य लिएका हाम्रा नेतृत्व आज कुर्सीको लडाइँमा लिप्त छन् । एकले अर्का सहयोद्धाको कुरा मान्ने अवस्था छैन । तँ ठूलो कि म ठूलो ? मैले भनेको मान्नु पर्दैन ? मैले भनेको सबैले मानेर जानुपर्छ, मैले भनेको नमान्ने तँ को होस् ? यस्तै यस्तै समस्याले गाँजिएका छन्, नेतृत्व ।
यही पारा हो भने कम्युनिष्ट आन्दोल जोगिँदैन, नामको मात्र कम्युनिष्ट पार्टी रहन्छ । वर्गीय राजनीति नारा र अक्षरमा परिभाषित भएपनि व्यवहारमा देखिँदैन । त्यसले गरीब झन गरीब हुँदै गए धनी झन धनी हुँदै गए । भ्रष्टाचार र कमिसन रोकिएन, रातारात मान्छेले करोडौंको घर बनाए । छोराछोरीको भेषभुषामा रातारात परिवर्तन गरिरहेका छन् ।
नेतृत्वकै कारण आज पार्टी फेरी विभाजनको संघारमा पुगेको छ । विभाजन शहीदको सपना थिएन । पार्टी विभाजनले केही व्यक्तिको स्वार्थ त पूरा होला तर गौरवपूर्ण बलिदानको अपमान हुनेछ । आज पार्टी विभाजनको संघारमा हुँदा को कता ? भन्ने विषय मुख्य होइन । यो समय कुनै नेताको पक्षमा लाग्नेभन्दा पनि पार्टी एकताको पक्षमा नेता कार्यकर्ताले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ।
कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षाका लागि फेरि एक पटक संघर्षमा जुट्नु पर्ने बेला आएको छ । कम्युनिष्ट एकता कायम गर्दै आम जनताको पक्षमा काम गर्नसके मात्र शहीदको सपना साकार हुनेछ ।
(झापा विद्रोहका क्रममा २०२९ साल फागुन २१ गते झापा र इलामको सीमाना सुखानीमा हत्या गरिएका शहीद रामनाथ दाहालका श्रीमती विश्वेश्वरा दाहालसँग दृष्टिकर्मी एमपी सुब्बाले गरेको कुराकानीमा आधारित । विश्वेश्वरा पूर्वसांसद हुन् ।)
फिर्ता हुने राजदूत को-को हुन् ? (नामावालीसहित)
काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ
सशस्त्रमा विभूषणको बिकृतीः देउवाका ज्वाईदेखि बडीगार्डसम्मलाई
काठमाडौं । यो वर्षको विभूषण वितरणले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी कति कमजोर
अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा आएबाट संगठन बदनाम
काठमाडौं ।– मोटरसाइकलमा लागुऔषध राखेर पत्रकारलाई फसाउने प्रयास गरेको षड्यन्त्र खुलेपछि रौतहका एसपी सिद्धिबिक्रम शाहमाथि
दुई मन्त्रीसहित एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । शुक्रबार साँझ उनले
संविधानको चीरहरण र कौरवहरूको पतन
षड्यन्त्र गरेर मलाई फसाइएको हो : गच्छदार
२० अर्ब ७६ करोडको निर्यात हुँदा १ खर्ब ३० अर्बको व्यापार घाटा
सेना संविधानप्रदत्त जिम्मेवारीमा अडिग रहन्छ : प्रधानसेनापति
विदेश जाने बढे, विप्रेषण आप्रवाह घट्यो